Fiangonana Batista Biblika Ankadivato > Blaogy > Torolalana > Manokana fotoana ho an’Andriamanitra (2)
Tapany faharoa amin’ny torolalana mikasika ny fanokanana fotoana manokana ho an’Andriamanitra isan’andro. Azonao jerena ato ny tapany voalohany.
Fotoam-pandinihana Baiboly isa-maraina
Fotoana: isan’andro, 5:40-6:15
Toerana: ohatra: ny latabatra fisakafoana
5:40-5:45 – Vavaka fifonana, fiderana ary fisaorana
• Mankanesa eo anatrehan’ny Rainao amin’ny anaran’i Jesoa Kristy, noho ny asam-pamonjena efa vitany tamin’ny Hazofijaliana.
• Ambarao ny fiankinanao amin’ny Fanahy Masina amin’ny vavakao (Romana 8:26-27). Mangataha ny fanampiany ho an’ny fotoam-bavaka ataonao.
• Mivavaha mba horaisin’ny Ray ny fanompoam-pivavahanao, ka ho hitany fa feno fifaliana tokoa ny fonao noho ny fahasoavany be voninahitra.
• Mibebaha amin’ny fahotanao eo anatrehan’ny fahamasinan’Andriamanitra. Mangataha famelan-keloka amin’ny alàlan’ny ran’i Kristy nilatsaka teo amin’ny Hazofijaliana (Matio 6:12; Hebreo 10: 19-23).
Makà fotoana hankasitrahana ny fiarahanao amin’Andriamanitra ao amin’i Kristy. Saintsaino ny hatsaran’ny fahalavorariany sy ny asa mahagaga nataony nandritra ny taona maro. Omeo voninahitra ny Tompo noho ny anarany (Salamo 96: 7-9), ary manajà Azy ho Andriamanitra amin’ny fisaorana Azy (Romana 1:21), noho ny fanomezam-pahasoavana tsara sy mahatalanjona rehetra natolony (Jakoba 1:17). Afaka atao an-kira io fotoana io.
5:45-5:50 – Vavaka fangatahana mifantoka amin’Andriamanitra
• Mba hanomezan’ny olona rehetra voninahitra an’Andriamanitra (Matio 6:9) ka…
• Mba hahatonga ny fanjakany hitombo noho ny asa fanompoana ataon’ny Fiangonana (Matio 6:10a).
• Mba hahatongavan’ny fanjakany amin’ny fahafenoany (Matio 6:10a; Apokalypsy 22:20). Izany hoe, mivavaha ho amin’ny fiaviany fanindroany sy ny fametrahana ny fitondrany tanteraka eto an-ny tany.
• Mivavaha mba hatao ny sitrapony etỳ an-tany tahaka ny any an-danitra (Matio 6:10b). Izany hoe, tsy misy fisalasalana ary feno zotom-pifaliana izay manompo Azy.
5:50-5:55 – Vavaka fangatahana ho an’ny tenanao manokana
• Mba hitomboanao amin’ny fahasoavana sy ny toe-panahy araka an’Andriamanitra (2 Petera 3:18). Ataovy mifanaraka amin’ny zavatra ilainao manokana ho amin’ny fitomboana ara-panahy ny fangatahanao.
• Mitoloma am-bavaka amin’ny fahotana manokana izay misy eo amin’ny fiainanao. Vonoy io ota io ary angatahao ny fanampian’ny Fanahay Masina (Romana 8: 12-13).
• Ho an’ny asa fanompoana ataon’ny tenanao manokana, mba hamirapiratra ny fahazavanao eo anatrehan’ny olona, ho voninahitry ny Rainao (Matio 5:16).
• Mba hanomezan’Andriamanitra hatrany ny zavatra ilainao isan’andro (Matio 6:11), toy ny sakafo, ny fialofana, ny asa, sns.
• Ho an’ny fahafahanao amin’ny fakam-panahy (Matio 6:13), ary, rehefa tonga ny fakam-panahy, mba homeny hery hiaretana ka tsy ho lavo amin’izany (1Korintiana 10:12-13).
• Mba hahazoanao hery sy faharetana amin’ny fitsapana (Jakoba 1: 2-4), izay andalovanao ankehitriny na ireo ho avy.
5:55-6:00 – Vavaka fangatahana ho an’ny hafa
Mandritra io fotoana io, mivavaha ho an’ny namana sy ny fianakaviana. Azonao atao ny manaraka lisitra mba tsy hisy ho adino. Mivavaha ho an’ny olona samihafa amin’ny andro samy hafa. Ohatra, ao anatin’ny 5 andro:
• Alatsinainy: Fangatahana manokana ho an’ny fianakavianao akaiky.
• Talata: Fangatahana manokana ho an’ny mpiara-mivavaka na mpiara-manompo.
• Alarobia: Vavaka ho an’ny pasitera sy ny loholona miahy anao, ary koa ireo misiônera izay fantatrao. Azonao atao ny misafidy fianakaviana misiônera hafa, na roa isan-kerinandro, ary mandalo tsiroaroa. Mivavaha koa ho an’ny pasitera, loholona, ary evanjelista fantatrao ivelan’ny fiangonana misy anao.
• Alakamisy: Vavaka ho an’ny olona mifanerasera aminao eo amin’ny sehatry ny asa na ny fianarana.
• Zoma: Vavaka ho an’ny mpitondra fanjakana, manam-pahefana, sy ho an’ny famonjena ireo tsy mino izay fantatrao.
6:00-6:15 – Famakiana ny Tenin’Andriamanitra
Tsy mamaky fotsiny tsotra izao, fa mamaky ka mijery sy mamantatra izay ahafahanao mitombo amin’ny fahafantarana an’Andriamanitra.
Mampiasà fitaovana: kahie hanoratana isan’andro, penina miloko fanamarihana samihafa, sns.
Avy eo dia apetrao ireto fanontaniana 3 ireto:
1. Inona no lazainy? (Fandinihana)
2. Inona no dikan’izany? (Famoahan-kevitra)
3. Inona ny fiantraikan’izany amiko? (Fampiharana)
Ireto misy fanontaniana 5 hahitana ny fampiharana ny Tenin’Andriamanitra:
1.Misy milaza amiko ny toetran’Andriamanitra izay tsy maintsy ekeko ve?
2. Misy ohatra iray tokony harahina ve?
3. Misy ota na tsy fankatoavana an’Andriamanitra izay tokony hialana ve?
4. Misy fampanantenana iray tsy maintsy horaisiko manokana ve?
5. Misy fitondrantena tokony horaisiko, sa zavatra tsy maintsy ovana amin’ny toetrako ve?
Soraty ny zavatra nianaranao, ary mivavaha ka misaora ny Tompo ny amin’izany.
Misaora an’Andriamanitra noho ny fanambarana momba Azy ao amin’ny Teniny.
Ambarao ny fitokisanao ny famindrapony sy ny fitiavany, ka hamaliany araka ny sitrapony ireo zavatra nangatahanao.
Mivavaha mba hahazo hery sy fahasoavana mba hanomezanao voninahitra Azy ary hanomponao Azy mandritra ity andro iray manontolo ity.